(tonga teto avy amin'ny Marc Ravalomanana)
Marc Ravalomanana (12 Desambra 1949 - ) no filohan' ny Repoblikan' i Madagasikara nanomboka ny 6 Mey 2002. Teraka tao Imerinkasinina tao Antananarivo renivohitr' i Madagasikara, manambady (Lalao Ravalomanana) ary manan-janaka efatra.
1 Mpitantana orinasa
2 Ben' ny tanàna
4 Vangio koa
Mpitantana orinasa[hanova | hanova ny fango]
Na teo amin' ny resaka politika na tamin' ny ara-barotra teo amin' ny fiainany manokana, dia olona miavo-tena izy. Fanaovan-dronono kely an' ny fianakaviana no notantaniny ka nanjary lasa orinasa ngeza, tamin' ny alalan' ny fanampian' ny Banky iraisam-pirenena sy ny fanohanan' ny governemanta tamin' izany fotoana. Teraka ny orinasa TIKO, mampiasa olona 5 000 mivantana sy asa 100 000 hafa ary raisina ho ohatra fakan-tahaka eo amin' ny fahombiazana izy, nefa tsy afaka amin' ny lazany koa ny tsikera ho orinasa anjakan' ny didiko fe lehibe sy fanavakavahana eo amin' ny fampidirana mpiasa.
Ben' ny tanàna[hanova | hanova ny fango]
Lany ho Ben' ny tanànan' Antananarivo izy ny taona 1999, na dia tsy notohanan' antoko pôlitika aza, tamin' ny alalan' ny fikambanana Tiako Iarivo izay naoriny. Ny fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna no nimatimatesany, ary goavana ihany koa ny fotodrafitrasa najorony. Betsaka ny sakantsakana nahazo azy noho izay fahombiazana azony izany ary indrindra koa nony namofompofona fifidianana ny vaninandro niainana teto Madagasikara. Nisy ny famatsiam-bola izay tokony ho azon' ny tanànan' Antananarivo nefa nifandrirariràna tamin' ny Minisitry ny Asa vaventy tamin' izany fotoana, Atoa Herivelona Ramanantsoa. Tao ny nolazainy ho antsojay nataon' ny orinasa Star (orinasa) tamin' ireo mpivarotra mandray ny Classiko, mpifaninana amin' ny vokatry ny Star toy ny Coca-cola, Fanta, ... Nanangana ny Madagascat Broadcasting System (MBS) ihany koa izy, izay fahitalavitra sy onjam-peo tsy miankina, mijoro ao Anosipatrana; ary anisan' ny azo heverina fa ny fifidianana ho avy no tena antony nijoroan' io fitaovan-tserasera io.
Lany ho filoha lefitry ny Fiangonan' i Jesoa Kristy eto Madagasikara (FJKM) izy ny volana oktobra 2001, sady izy ihany koa no anisan' ny mpanohana ara-bola izany fiangonana izany. Nalainy ho tombony ho azy ny fiaraha-miasa tamin' ny fiangonana, izay manana fotodrafitrasa sy tambajotra afaka manampy amin' ny fampielezan-kevitra ihany koa. Novainy ho Tiako i Madagasikara ilay fikambanana Tiako Iarivo, manambara ihany koa izay ny fahasahiany hanao dingana lehibe.
Ny 16 desambra 2001 no natao ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana filohan' ny Repoblika teto Madagasikara. Ny ministeran' ny atitany dia nanome voka-pifidianana 46,44 % ho an' i Marc Ravalomanana, ary 40,61 % kosa ho an' ny filoha am-perin' asa Didier Ratsiraka. Ny Kômity Manohana an' i Marc Ravalomanana (KMMR) kosa dia manohitra io vokatra io satria manome 52,15 % ho an' i Marc Ravalomanana. Ny Consortium des Observateurs koa dia nanome vokatra ambonin' ny antsasa-manila ho an' i Marc Ravalomanana, na dia nisy resaka projection sy fitanana an-tsoratra tsy feno aza tao. Nandritra izay fotoana izay, dia namory olona isan' andro isan' andro teo amin' ny Kianjan' ny Fahaleovan-tena sy nanao fihetsiketsehana ary fitokonana ny mpomba an' i Marc Ravalomanana. Mahatratra amana hetsiny isan' andro ny vahoaka malagasy vory teo.
Tetsy ankilany, ny fitondrana dia nametraka fa hatao ny volana febroary 2002 ny fihodinana faharoa. Rehefa tsy nahomby izay dia nekeny indray ny hanemotra izany fifidianana izany amin'ny volana martsa 2002. Kanefa tamin'ny 22 febroary 2002, dia « nanoso-tena » ho filohan'ny Repoblika tao Mahamasina i Marc Ravalomanana. Tsy nanaiky lembenana ny mpomba an'i Didier Ratsiraka, na dia hita ho azon-dRavalomanana aza ny fon' Antananarivo, izay renivohitr' i Madagasikara. Nifanaraka ny governora tamin' ny faritany dimy hafa ary natsangany ho Renivohitra faharoa an' i Madagasikara i Toamasina.
Tsy mbola havanana tamin' ny resaka pôlitika i Marc Ravalomanana, nefa maro ny olona sy antoko pôlitika nanohana azy, toy ny Asa Vita Ifampitsarana (AVI) an' i Norbert Lala Ratsirahonana, ny MFM tarihin' i Manandafy Rakotonirina. Tamin' ny ady mafy tamin' izany fotoana izany dia nanohana azy koa ny ankamaroan' ny manamboninahitry ny tafika.
Naverina ny fanisana ny vatom-pifidianana ary navoakan' ny Fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa lany tamin' ny fihodinana voalohany i Marc Ravalomanana. Nandray ny fahefana feno sy tamin' ny fomba ara-dalàna izy ny 06 Mey 2002, natrehin' ny olona faharoa isaky ny masoivoho teto Madagasikara. Niverina ho anisan' ny mpikambana tao amin' ny Fiombonambe Afrikanina i Madagasikara tamin' ny jolay 2002, rehefa nanao sesitany ny tenany tany Frantsa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka sy ny mpomba azy sasany, ary rehefa neken' ny OUA tamin' ny fihaonan' ireo filoham-pirenena afrikanina izany fiverenany izany.
Tranokalan'ny TIM Archived Aprily 7, 2007 at the Wayback Machine
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ravalomanana_Marc&oldid=1023986"
Voaova farany tamin'ny 12 Aogositra 2021 amin'ny 11:46 ity pejy ity.